I-china ukukhangisa kwe-acrylic okonga amandla ibhokisi elikhanyisa abakhiqizi nabaphakeli | UZhengcheng
Khetha izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme, ezenziwe ngabaklami, lawula ngokuqinile ikhwalithi, izimpawu ezisezingeni eliphakeme nezimpawu ezinhle, bese udala isithombe esihle somkhiqizo.
Igama lomkhiqizo: Ukukhangisa kwe-Acrylic okonga amandla ibhokisi lezimpawu
Isicelo: Isitolo esikahle, isitolo sekhofi, isitolo sekhekhe, isitolo esikhulu
1. Izindleko zokuqala zokutshala imali zokukhiqiza ama-signboards ajwayelekile ziphansi kakhulu, ngoba lamabhodi okusayina enziwa kakhulu ngamaphaneli e-acrylic asetshenzisiwe. Kodwa-ke, amaphaneli azobuna, akhubazeke, aqhume kanye nezinye izinkinga ezinyangeni ezi-3 kuye kwezi-5, ezifushanisa kakhulu impilo yesevisi yesibonakaliso.
2. Ekhiqizweni kwamabhokisi wokukhanya wendabuko, i-chloroform dilute glue ivame ukusetshenziselwa ukuhlanganisa ama-swatches namaphaneli. Ukusebenza kokubekwa uphawu kubuthakathaka, futhi kuthinteka ekuthonyeni kwezinga lokushisa nezinto ezihambayo ukudala imifantu. Uthuli nokungcola kuzoqoqeka kalula kuma-swatches nakumapaneli ngemuva kokugezwa yimvula. Ngakho-ke, uthuli nokungcola akunakuhlanzwa, futhi kuzothinta umphumela okhanyayo webhodi yezimpawu kanye nokulimaza ukubukeka kwebhodi lesiginali.
3. Amabhokisi wokukhanya wendabuko ikakhulukazi enziwa ngezifiso kusayizi wesayithi. Uma isitolo sihamba, isilinganiso sokuqala sokusetshenziswa kwamabhodi angaphansi kuka-5%.
Izinkinga zixazululwe ngu-zhengcheng
1. Yamukela ibhodi ye-acrylic yaseJapan engenisiwe, ukuqina okuphezulu, indawo ebushelelezi nokudluliswa kokukhanya okuqinile. Uma isetshenziswa ngamashubhu e-LED, ukukhanya kufana. Ngasikhathi sinye, le nto ayimelana nemisebe ye-ultraviolet, akulula ukuyifela, akulula ukuyikhubaza, futhi inempilo ende.
2. Ibhodi lesikhangiso lebhokisi lokukhanya likaZhengcheng lisikiwe ngamabhokisi amaningi alula, okulula ukuwafaka. Ngaphezu kwalokho, ingaphinda ifakwe kabusha iphinde isetshenziswe ngemuva kokuthi isitolo sithuthelwe kwenye indawo.
Langaphambilini Ibhodi lophawu lwangaphandle olukhanyisiwe lwangaphandle lwegrosa
Olandelayo: Isitolo esidayisa izinto esidayisa kalula i-Yonghui
Isibonakaliso se-Acrylic Light Box
Isibonakaliso se-Lightbox se-Acrylic
Ibhodi lokungena le-Light Light
I-Light Box Signboard
Izimpawu Zebhokisi Elikhanyayo
Izimpawu Zamabhokisi Wokukhanya Kwangaphandle we-Acrylic
Uphawu lwebhokisi lokukhanya kwangaphandle
Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light
Izimpawu Zamabhokisi Wokukhanya Okungenamanzi
I-Pharmacy Signboard, Izimpawu Zokukhangisa, Izimpawu Ezikhanyisiwe, I-Blister Light Box Signboard, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light,